Chrome OS 80 inovandudza kuisirwa maAPK uye inoita iyo PiP paNetflix | Linux Vakapindwa muropa
Zvakatora nguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa, zvirokwazvo iyo previous version Yakabuda pakati paDecember uye izvi zvaitarisirwa muna Kukadzi 11, asi isu tatova nazvo pano Chrome OS 80. Inowanikwa kwemaawa mashoma, iyo nyowani vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu-yakashomeka-zviwanikwa makomputa kubva kuGoogle ndiko kwakakosha kuburitswa, kunyanya kune avo vanoshandisa midziyo yeLinux: kubva zvino zvichienda mberi, ichashandisa Debian 10 "Buster", chimwe chinhu chakagadziridzwa kubva kuDebian 9 " Tambanudza ". Izvi zvinoreva kuti, nekumisikidza, mamwe akavandudzwa mapakeji achaunzwa, asi kuti uwane izvi uchafanirwa kudzoreredza sisitimu yekushandisa ku v80.
Chimwe chiitiko chakatanhamara ndechekuti izvozvi unogona gadza ma APKndiko kuti, maApplication eApple pasina kufanirwa kumisikidza iyo yega sisitimu inoshanda mune yekuvandudza nzira. Izvi zvichavandudza ruzivo rwevashandisi nekuti, kunyangwe chiri chokwadi kuti tsigiro yeApple maapps anga atobatanidzwa, ikozvino tinogona kuzviita zvakananga uye pasina kumisikidza sarudzo dzepamberi idzo, kazhinji, dzinogona kuve nenjodzi. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kunaka nhau dzakasvika neChannel OS 80.
Zvakakwirisa zve Chrome OS 80
Iyo nyowani yeLinux Containers inoshandura kuenda kuDebian 10 "Buster", asi iyo yekuvandudza haizove otomatiki
Iyo tabu tambo yekumisikidza yakawedzerwa kune piritsi modhi. Kana ikasaoneka, inogona kumisikidzwa kubva kune izvi zvinongedzo: chrome: // mireza / # webui-tab-strip, chrome: // mireza / # nyowani-tabstrip-yehupenyu y chrome: // mireza / # scrollable-tabstrip. Iyo komputa inofanirwa kutangwazve kuti shanduko dziitwe.
Yakagadziriswa bhuru ine screen auto-kutenderera.
Iye zvino unogona kuona Netflix muPiP, iyo yatinoyeuka iri hwindo rinotenderera iro rinoratidza vhidhiyo iri mubvunzo. Izvo hazvisimbiswe kana iri nyowani kune iyo v80 yeiyo inoshanda sisitimu kana iri zvakare inowanikwa mune dzakapfuura shanduro.
Iyo vhezheni nyowani yakatangwa nezuro Kurume 2 uye, senguva dzose, Google irikuendesa zvishoma nezvishoma. Izvi zvinoreva kuti, kana usati watogamuchira, uchaigamuchira mumaawa mashoma kana mazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Chrome OS 80 inovandudza kuisirwa maAPK uye inoita iyo PiP paNetflix